Laser magaabay, Laser xardha, CNC Laser magaabay - Mingjue
Laser magaabay xardha
Mashiinka Calaamadaha Laser Golaha Wasiirada
Mashiinka calaamadeynta laysarka
mashiinka calaamadeynta laser-ka oo buuxa
Mashiinka calaamadeynta laser-ka la qaadan karo
Max 20W Cover Cover Machine Fiber Laser ...
30W Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser Isku-dhafan oo ...
50W Raycus Kala Fiber Laser Calaamaynta Machine ...
Raycus 30W Golaha Wasiirada Fiber Laser Calaamaynta Machine ...
55 x 35-1 / 2 Inches 130W CO2 Laser xardha iyo ...
Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD waa shirkad warshad iyo is dhex galka ganacsiga ah oo la dhisay sanadkii 2016. Waxaan si wada jir ah ula shaqeyneynaa seddex warshadood oo sare si aan u siino adduunka wax soo saar tayo sare leh. Tan iyo markii shirkadda la aasaasay, waxaan si adag uga shaqeynay sidii aan u noqon lahayn hoggaamiye ku xardhan leysarka, jarista iyo calaamadeynta warshadaha. Waxaan nahay hal abuurayaal. Waxaan nahay mushkilad xaliya. Waxaa naga go'an inaan naqshadeynno oo aan adduunka u siino nidaamyada leysarka ugu tayada sarreeya.
Aaway ganacsigeena kala duwan: Ilaa iyo hada waxaan ka sameynay nidaamyo wakiilo prosy ah Algeria, Masar, Iran, Koonfur Afrika, Hindiya, Malaysia iyo Wadamada kale ee Koonfur-Aasiya. Sidoo kale Bariga Dhexe iyo Koonfurta Ameerika. Waxaan leenahay lamaane iyo macaamiil aad u tiro badan.
Talooyin ku saabsan iibsashada mashiinka goynta / xardho laser-ka
Tallaabada 1: Arrinta Koowaad Waa Taageero. Waxaa jira waxyaabo badan oo raqiis ah oo laga keeno, inta badan Shiinaha, suuqa. Laakiin laser-ku waa mashiinno isku murgisan oo wuu jabayaa una baahan yahay in la dayactiro. Hubso in ...
Mashiinnada xardho Laserartist CO2 waxay bixiyaan fursado badan oo kala duwan. Kafiicnaan badan qaabeeyeyaasha router-ka ama mashiinnada wax shiida, kuwa wax xardha ee laser-ka ah ee loo yaqaan 'CO2 laser' ayaa si dhakhso leh oo fudud u waafajin kara woode ...
5 Waxyaabaha ugu waaweyn ee saameeya tayada sixitaanka mashiinka calaamadeynta laser-ka
Waxqabadka mashiinka calaamadeynta laser-ka ayaa si tartiib tartiib ah u yaraanaya ka dib marka la isticmaalo muddo dheer. Waa maxay sababta tan? Maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee saameeya tayada mashiinka calaamadeynta laser-ka ...
Xulista mashiinka xardho laser
Sanado ka hor, mashiinka xardho laser-ka wuxuu kaliya fulin karaa qaabab yar oo xardhan oo ay ugu wacan tahay xaddidaad xagga farsamada ah. Iyadoo la cusbooneysiinta joogtada ah iyo horumarinta tiknoolajiyada, soo saarida hooyada gacanta ...
1 # Lvting Rd, Cangqian Street, Degmada Yuhang, Hangzhou City, Shiinaha. 310023